Don’t Watch – Quality – Channel Myanmar
The Human Centipede3(Final Sequence) (2015) The Human Centipede Trilogyလူသားကင်း​ခြေများဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်က​တော့ ​အော်ဂလီဆန်စရာအ​ကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား​တွေထဲမှာ အပါအဝင်ပါပဲ... ပညာရှိတို့ အရူးထရင် ဘယ်လို​တောင်​ကြောက်စရာ​ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ၂၀၀၉မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ပထမကားမှာ မြင်​တွေ့ရပါမယ် လူသား၃​​ယောက်ကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံဘယ်နည်း တွယ်ဆက်မလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ။၂၀၁၁မှာ ထွက်ရှိတဲ့ ဒုတိယရုပ်ရှင်က​တော့ ပထမကားကိုစွဲလမ်း​ပြီး လူသား​တွေကို ကြုံသလို ဆက်မယ့် လုံခြုံ​ရေးသမားအ​ကြောင်းပါ..သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အ​​ဖေဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုကို ခံထားရသူပီပီ ပိုကြမ်းမှာပါ ဒီကားကို​တော့ ဒါရိုက်တာက ကင်း​ခြေများကိုပဲ Focus မလုပ်ဘဲ dark theme ​လေး ခံစား​စေချင်လို့ black and white တင်ဆက်ထားပေမယ့် ကျနော်တို့ Dark Side ကတော့ Colorized Version နဲ့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။၂၀၁၅မှာ ​နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Final Sequence မှာ​​တော့ ​နေမြင့်​လေ အရူးရင့်​လေဖြစ်တဲ့ ​ထောင်ပိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့ ...
The Human Centipede2(Full Sequence) (2011) The Human Centipede Trilogyလူသားကင်း​ခြေများဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်က​တော့ ​အော်ဂလီဆန်စရာအ​ကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား​တွေထဲမှာ အပါအဝင်ပါပဲ... ပညာရှိတို့ အရူးထရင် ဘယ်လို​တောင်​ကြောက်စရာ​ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ၂၀၀၉မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ပထမကားမှာ မြင်​တွေ့ရပါမယ် လူသား၃​​ယောက်ကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံဘယ်နည်း တွယ်ဆက်မလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ။၂၀၁၁မှာ ထွက်ရှိတဲ့ ဒုတိယရုပ်ရှင်က​တော့ ပထမကားကိုစွဲလမ်း​ပြီး လူသား​တွေကို ကြုံသလို ဆက်မယ့် လုံခြုံ​ရေးသမားအ​ကြောင်းပါ..သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အ​​ဖေဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုကို ခံထားရသူပီပီ ပိုကြမ်းမှာပါ ဒီကားကို​တော့ ဒါရိုက်တာက ကင်း​ခြေများကိုပဲ Focus မလုပ်ဘဲ dark theme ​လေး ခံစား​စေချင်လို့ black and white တင်ဆက်ထားပေမယ့် ကျနော်တို့ Dark Side ကတော့ Colorized Version နဲ့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။၂၀၁၅မှာ ​နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Final Sequence မှာ​​တော့ ​နေမြင့်​လေ အရူးရင့်​လေဖြစ်တဲ့ ​ထောင်ပိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့ ...
The Human Centipede (First Sequence) (2009) The Human Centipede Trilogyလူသားကင်း​ခြေများဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်က​တော့ ​အော်ဂလီဆန်စရာအ​ကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား​တွေထဲမှာ အပါအဝင်ပါပဲ... ပညာရှိတို့ အရူးထရင် ဘယ်လို​တောင်​ကြောက်စရာ​ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ၂၀၀၉မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ပထမကားမှာ မြင်​တွေ့ရပါမယ် လူသား၃​​ယောက်ကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံဘယ်နည်း တွယ်ဆက်မလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ။၂၀၁၁မှာ ထွက်ရှိတဲ့ ဒုတိယရုပ်ရှင်က​တော့ ပထမကားကိုစွဲလမ်း​ပြီး လူသား​တွေကို ကြုံသလို ဆက်မယ့် လုံခြုံ​ရေးသမားအ​ကြောင်းပါ..သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အ​​ဖေဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုကို ခံထားရသူပီပီ ပိုကြမ်းမှာပါ ဒီကားကို​တော့ ဒါရိုက်တာက ကင်း​ခြေများကိုပဲ Focus မလုပ်ဘဲ dark theme ​လေး ခံစား​စေချင်လို့ black and white တင်ဆက်ထားပေမယ့် ကျနော်တို့ Dark Side ကတော့ Colorized Version နဲ့ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။၂၀၁၅မှာ ​နောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Final Sequence မှာ​​တော့ ​နေမြင့်​လေ အရူးရင့်​လေဖြစ်တဲ့ ​ထောင်ပိုင်နဲ့ သူ့ရဲ့ ...
[18+] Grotesque (2009) ဘာမှမပြောခင် ကြိုပြောချင်တာကတော့ ဒီဇာတ်ကားကို မိတ်ဆွေတို့ တတ်နိုင်ရင် မကြည့်ပါနဲ့...မတတ်နိုင်လို့ ကြည့်ဖြစ်သွားလို့ တစ်ချက်စိတ်ထင့်သွားတာနဲ့ ဆက်မကြည့်ပါနဲ့...ဒီဇာတ်ကားရဲ့ Label ကိုလဲ Don't Watch ဆိုပြီး တပ်ပေးထားပါတယ်...အခုနောက်ပြန်လှည့်ဖို့ အချိန်မှီပါသေးတယ်။အညွှန်းတောင်မဖတ်စေချင်ပါဘူး..ဖတ်ချင်သပ ကြည့်ချင်သပဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေတို့ ပြသနာနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ပါပဲ။+++++++++++++++++++++++++++++++Grotesque(2009)ကောင်မလေးနဲ့ချိန်းတွေးတဲ့ ပထမဆုံးDateမှာပဲ စိတ္တဇလူသတ်ကောင်တစ်ယောက် အဖမ်းခံရပြီး ကိုယ်မနမ်းဖူးသေးတဲ့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးကို လူသတ်ကောင်က Abuse လုပ်နေတဲ့အဖြစ်ကို တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီထက်ဆိုးတာရှိနိုင်ပါဦးမလား။ ရှိပါသေးတယ်။ လာပါဦးမယ်။အရူးတစ်ယောက်က ခုတ်ချင်သလိုခုတ်သတ်တာလောက်ကို အဆိုးရွားဆုံးလို့ သင် ထင်နေပါသလား။ မထင်ပါနဲ့ဦး။ ဒီကားထဲက နှိပ်စက်မယ့်လူဟာ အတော်ဆုံးအနာကုပါရဟူ ဆုကိုပါရထားပြီး အပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ်လှီးပြီးတာတောင် မသေအောင်ကုပေးနိ်ုင်တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။ ဝှေးကို သံနဲ့ရိုက် Penisကိုဖြတ်ပစ်ပြီးတာတောင် အေးဆေးပြန်ကုနိုင်ပါတယ်။စိတ္တဇလူသတ်ကောင်လက်ထဲ သေတော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်ဒုံးဒုံးချသေလိုက်ရတာထက် ဆိုးတာရောမယ်ထင်ပါသလား။ ရှိပါတယ် လွတ်မြောက်ပြီထင်အောင်လုပ်ပြီး စည်းစိမ်တွေမက်လုံးပေးပြီးမှ မျှော်လင့်ချက်ကိုပြန်သတ်ခံရတာက ပိုဆိုးပါတယ်။စအိုတစ်ဖက်ကအူအဆုံးကိုချိတ်နဲ့ချိတ်ခံထားရင်းက ဗိုက်ထဲက အူကုန်အောင်တွားသွားသွားရင်း ကိုယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးကို ကယ်ရတဲ့အရာအပါအဝင် ကျွန်တော်မပြောပြရသေးတဲ့ ရက်စက်မှုတွေ အများကြီးပါပါသေးတယ်။Ratingနည်းပေမယ့်လည်း ရက်စက်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းထားတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်ကားတွေရဲ့ ဘုရင်ကားလို့ဆိုကြပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်မှုတွေ သွေးယိုသံစီး ကိုယ်ပြတ်မျက်ကန်း နှိပ်စက်မှုတွေ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Bannedခံထားရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက် အသည်းငယ်တတ်သူတွေ ၁၅နှစ်အောက်တွေ မကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကိုက သွေးသံရဲရဲတွေ နှိပ်စက်မှုတွေကို အရသာခံကြည့်တတ်တဲ့ Sadistတစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အတော်ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ကားလို့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ အာမခံပါတယ်။P.S.... ဒီရုပ်ရှင်ကို ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က ဘာသာပြန်ခဲ့တာပါ။ ...